सेकेन्ड म्यारिजमा रमाउनेहरू ! - Dainik Nepal
सेकेन्ड म्यारिजमा रमाउनेहरू !
दैनिक नेपाल २०७६ जेठ ५ गते ११:३४
काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवी लामिछाने र चलचित्र विकास बोर्डकी निवर्तमान अध्यक्ष निकिता पौडेलबीच शुक्रबार बिहे भयो । यो दुवैका लागि दोस्रो बिहे थियो । अर्थात्, सेकेन्ड म्यारिज ।
नेपाली समाजमा सेकेन्ड म्यारिजको प्रचलन बढ्न थालेको छ । सामाजिक रूपमा ‘दोस्रो पोइल अथवा जोइल’ भन्ने प्रचलनले अब वैधानिकता पाउन थालेको छ । यो वैधानिकताको प्रचारप्रसार सेलिब्रिटीबाट नै हुन थालेको छ ।
लामिछाने र पौडेलको बिहेमात्र होइन, कतिपयको सेकेन्ड म्यारिजका घोषणा भइरहेका छन् । फूलमाला गरेका र असारमा बिहेको तयारीमा रहेका भनिएका प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज श्रेष्ठको सम्बन्ध पनि चर्चामा छ । आयुष्मानका लागि पहिलो भए पनि कार्कीका लागि यो दोस्रो बिहे हुँदैछ । यसअघि उनी रोचक मैनालीसँग बिहे गरी अमेरिका छिरेकी थिइन् ।
नेपाली फिल्म उद्योगसँग सम्बन्ध राख्ने धेरैका यस्ता सेकेन्ड म्यारिज छन् । खासगरी नाम चलेका कलाकारका पनि । यसै मध्येमा पर्छन् अभिनेता निखिल उप्रेती र संचिता लुइँटेल । यो जोडीका दुवैका लागि दोस्रो बिहे थियो ।
त्यसो त दोस्रो बिहे गरेर विदेशमा भासिने कलाकार पनि कम छैनन् । धेरै अभिनेत्री कान्छी पत्नी हुने चर्चाका रूपमा पनि आएको थियो । सूरज चन्दसँग बिहे गरेकी अभिनेत्री पूजा चन्दले अमेरिकामा दोस्रो बिहे गरिन् । अहिले उनी पारिवारिक जीवन राम्रोसँग चलेको बताउँछिन्, बेलामौका ।
सेकेन्ड म्यारिज गरी जीवनलाई अगाडि बढाउने मध्येका कलाकारमा पर्छन्, भुवन केसी । उनी तेस्रो बिहेको तयारीमा रहेको पनि चर्चा छ । सुस्मिता बोमजनसँग उनको दोस्रो बिहे थियो, जसबाट अभिनेता अनमोल केसीको जन्म भएको थियो । सुस्मिताले पनि विदेशी पुरुषसँग बिहे गरिसकेकी छन् ।
‘यस्ता धेरै नेपाली कलाकारले अनेक मोडमा आएर दोस्रो बिहे गरेका छन् । पर्याप्त उदाहरण सतहमा देखिएकै छन्’, एक निर्माता भन्छन् ।
अभिनेत्री रेखा थापासँग दोस्रो बिहे गरेका थिए, निर्माता छविराज ओझाले । ओझा र थापाको वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नभएपछि थापा अर्को बिहेको तयारीमा छिन् भने ओझाको अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलसँग लिभ इन रिलेशन रहेको चर्चा छ । कतिपयले भने उनीहरूले बिहे नै गरिसकेको पनि दाबी गर्छन् । ओझाको यसअघि अभिनेत्री गीताञ्जलीसँग बिहे भएको थियो, जसको आत्महत्या भएको बताइन्छ ।
पत्नी मिराको निधन भएपछि विछिप्त भएका कलाकार हरिवंश आचार्यले पनि रमिला पाठकसँग दोस्रो बिहे गरेका थिए । बसुन्धरा भुसालको मध्यस्तताका आधारमा रमिलाले पनि आचार्यलाई स्वीकारिन् । यो पनि दुवैका लागि दोस्रो बिहे थियो ।
कतिपय कलाकारले गाँसेको पहिलो सम्बन्धमा मनमुटाव हुने, रहरै रहरले गाँस्ने र परिपक्व भएपछि त्यस्ता सम्बन्ध तोडिने गरेका छन् । जीवनलाई एकल हिसाबले सहज रूपमा चलाउन नसकिने भएपछि धेरैले दोस्रो लगन कस्ने गरेका हुन् ।
मुम्बइमा सडकबाट आएकी रानु भइन गायिका
रिलिज अगाडि ‘साहो’ले कमायो ३२० करोड
पूर्वपोर्नस्टार सनी लियोनले मोदीलाई जितिन्
वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक किशोर राना मगरको निधन
रवि लामिछानेका समर्थक र प्रहरीबीच झडप, लाठीचार्ज र अश्रु ग्यास प्रहार, केही प्रहरी घाइते